Amakhemikhali anomsoco ayaziwa kusukela esikhathini esidala, awasetshenziswanga ukudla kuphela, kepha asetshenziswa njengezitshalo zokwelapha. Manje izitshalo ezivundiwe nazo zisetshenziselwa, kepha kaningi njengezinkokhelo ezitsheni ezihlukahlukene. Uma ehlobo ukukhetha nokuthenga imifino emisha kulula, futhi amanani ayamukelekile, ngakho-ke ebusika imifino iyabiza, futhi izinga lomkhiqizo awukona.
Ukuze silondoloze ibhalansi elidingekile lamavithamini ebusika, akudingekile ukuthenga isigamu sekhemisi, lokhu kunganakekelwa ekupheleni kukaSeptemba; okwanele ukutshala i-mint, i-basil, i-root parsley, i-chives, i-rosemary ibe yizimbiza zezimbali. Ukufakelwa kuphela akufanele ukukhula komuntu omdala, kodwa osemncane, kusukela enzalweni yenzalo. Ngesikhathi esifanayo, hlwaba amanzi, i-dill, isinaphi esimhlophe nesipinashi. Uma ungathatha umhlaba ngokutshala izitshalo, ikakhulukazi njengoba zijwayelekile, ngakho-ke izitshalo zikhulile kusuka kumbewu, kungcono ukuthenga inhlabathi ekulungele. Imbewu ikhetha izinhlobo zokuvuthwa zakuqala. Ngemuva kokuhlwanyela imbewu ye-tank, kungcono ukumboza ama-mullions weglasi ngefilimu ye-n / ethylene, njengokungathi uhlela i-mini-greenhouse. Ukunisela kufanele kwenziwe ngokucophelela, nge-spray encane yamanzi noma isibhamu se-spray.
Emikhulwini enhlabathi evulekile, izimo zendawo yokukhula zizobe zishisa kakhulu: ukungabi namandla okukhanya kwelanga nokukhanya, ngisho noma kufakwe emafasitela efasitela. I-Glass yimizila engaphansi kwe-infrared, ngakho-ke kuyadingeka ukuze isitshalo sikhule ngokugcwele. Ebusika, "imibhede" ihlelwe kumafasitela aseningizimu futhi ihlanganisa i-phytolamp eyengeziwe. Kuhambisana nokukhanya kubalulekile ukucabangela ukuthi wonke umuntu uyakuthanda ukushisa, amanzi nokudla, izitshalo kulokhu akuzona okuhlukile, futhi ukukhathazeka kwethu ukuhlinzeka ngokudingekile nokuvuna ebusika.
Ukugqoka okuphezulu kungcono ngokufezwa ngamaminerali nezitshalo eziphilayo. Ukondla i-spinyetrava kuphela, zama ukuwasebenzisa ngaphansi kwezimpande, hhayi ubuningi obuhlaza bezitshalo. Esikhathini sill window, asikho isidingo sokulinda ubukhulu bemasiko, ukukhula ngokwanele ngu-5-8 cm. Uma izitshalo zikhula kakhulu, zinciphise esigabeni esilungele ukusetshenziswa, lezo ezisele zizokhululeka.
Imbewu yedill isetshenziswe emoyeni, futhi emva kokuvela kwamahlumela, izitshalo kudingeka zidonwe, zishiye u-2-3 cm emkhatsini we-plantings. I-Dill isetshenziselwa ukudla, fresh kanye nesomisiwe neqhwa. Kulungele ukufaka izitsha zeladidi, inyama, imifino kanye nama-mushroom. Idayi isetshenziselwa imithi yabantu, njenge-diuretic ne-cholagogue, ithuthukisa umsebenzi wepheshana lomzimba.
I-basil ihlwanyelwa emabhokisini amancane, aswakanyiswe esitokisini se-spray, esembozwe ifilimu futhi ashiye endaweni efudumele. Ngemva kokuba izitshalo zifinyelele ukuphakama kwe-4-5 cm, i-basil ingafakwa endaweni ehlala njalo. Ibhokisi elinotshani elimnandi kufanele libe yindawo ye-sunflower, futhi isitshalo kufanele siphuze njalo, kodwa akumele kuthulwe. Kudingeka ukondle njalo ngesonto. I-Basil isetshenziselwa ukuphunga izobho, ukudla izitsha, ama-omelettes, amasoso nokunye. Ezokwelapha, basilikaspolzuyut yezifo zokuphefumula, kuyasiza ku-asthma, izifo zenhliziyo, kanye nokusetshenziselwa ukunakekela umlomo womlomo.
Isitsha esinezimbewu zesinaphi sifakwe endaweni efudumele. Emva kokuvela kwamahlumela, izitshalo kumele zenziwe kancane, zishiye izitshalo 2-3 embizeni. I-mustard idinga ukuchelela okuningi, kodwa akudingekile ukuthi ukondle lesi sitshalo kaningi. Amaqabunga amancane asebenzisa iVatah futhi njengendwangu ehlangothini ukudoba nezitsha zenyama. Lesi sitshalo sinamavithamini C amaningi, amaqabunga amaqabunga aqukethe amavithamini e-mustard B, B2, PP.
Kubonakala sengathi noma yimuphi umntwana ngeke abe nesithakazelo nje kuphela ukubuka, kodwa futhi nokunakekela izitshalo, ngakho-ke abantwana mababe ne-mini-ingadi yabo. Banike i-bowip-turnip, bawabeke egumbini lamanzi, bengeze 1/4 isipuni se-Mullein ukumnika okufakwayo. Awunayo yonke i-bulb ukuze ugcine ukuthayipha, izovuna ngokushesha; faka i-bulb kumbuthano wekhadibhodi enebhowu phakathi.
Lapha izinto ezinjalo ezingenakuqhathanisa zizokuvumela wonke umuntu ukuba abe nemifino emnandi yasebusika. Vumelana, lokhu kuhle kakhulu!
Indlela yokomisa ama-rose petals
Izitshalo ezingaphandle: i-gloxinia
Indlovukazi yezimbali - lily
Izitshalo zokwelapha zasendlini
Indlela yokunakekela i-neptens yembali
Ukunakekela izitshalo ze-citrus
Indlela yokupheka ikhekhe le-Easter
Indlela yokuhlobisa indlu ngonyaka weNja Ephuzi: 20 imibono emihle kakhulu!
I-Taco nenlimi yenkomo
Injabulo yesilisa nenjabulo encane
U-Ivan Urgant wakha ngesihluku uKsenia Sobchak ngokuhlazisa i-Vitorgan: ividiyo ehlazola
I-cheeky isaladi le-broccoli
I-baked mackerel ngesitayela saseMexico
Ukunakekelwa komzimba phakathi kwamacala
Umshukela omnyama we-currant